ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ဝိုင်းဝန်းလှုဒါန်းကြပါစို့။ | Su See Yar - Maynmar's first crowdfunding platform
ပင်မစာမျက်နှာ / ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ဝိုင်းဝန်းလှုဒါန်းကြပါစို့။
ကျွန်ုပ်တို့ Golden Future Volunteer Group သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော Volunteerအဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ် အကူအညီ လိုအပ်နေသူများအား မိမိတို့တတ်နိုင်သလောက် ငွေကြေးများ၊ အစားအသောက်များနှင့် လိုအပ်သော ကူညီထောက်ပံ့မှုများ ပေးနိုင်စေရန်အတွက် GFV Group အဖွဲ့ ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများထဲမှ အခက်အခဲဖြစ်နေသူ၊ အကူအညီလိုအပ်နေသူ အယောက်စီတိုင်းကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့မှ အလှူငွေများ ကောက်ခံပြီး ရရှိသောလှုဒါန်းငွေများဖြင့် အစားအသောက်များ၊ ရေသန့်၊ ဆေးဝါးများအပြင် လိုအပ်သောအထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများအား လှူဒါန်းလျှက်ရှိပါသည်။
ယခုလက်ရှိတွင် အလှူငွေများထဲမှ နေ့စဉ်ရံပုံငွေ ကျပ်တစ်သိန်း သတ်မှတ်ကာ အစားအသောက်များ ၊ ရေသန့်၊ ဆေးဝါးများ လှူဒါန်းလျှက် ရှိပါသည်။ ထပ်မံရရှိလာသောအလှုငွေပမာဏ၊ ဦးစားပေးလိုအပ်မှုပေါ်မူတည်ပြီး မူလရည်ရွယ်ချက်များဖြစ်သော အစားအသောက်နှင့် အခြေခံလှူဒါန်းမှုများအပြင်နှင့် အကူအညီ လိုအပ်နေသူများ၏ အခြားသောအခက်အခဲ၊ လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သိန်း၁၀၀ကျပ်*၂သိန်းကျပ် အထောက်အပံ့ *၅၀အိမ်ထောင်
သိန်း၂၀ ကျပ်*တခြားလိုအပ်ချက်များနဲ့ အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်
5,000 MMK(လူကြီးမင်းတို့ ၏ လှူဒါန်းမှုအား ကျွန်ပ်တို့မှ ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း" အီးမေလ်း ပေးပို့ဂုဏ်ပြုခြင်း）
20,000 MMK (လူကြီးမင်းတို့ ၏ လှူဒါန်းမှုအား ကျွန်ပ်တို့မှ ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း" အီးမေလ်း ပေးပို့ဂုဏ်ပြုခြင်း）
50,000 MMK (လူကြီးမင်းတို့ ၏ လှူဒါန်းမှုအား ကျွန်ပ်တို့မှ ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း" အီးမေလ်း ပေးပို့ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ချီးမြှင့်ခြင်း）
100,000 MMK (လူကြီးမင်းတို့ ၏ လှူဒါန်းမှုအား ကျွန်ပ်တို့မှ ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း" အီးမေလ်း ပေးပို့ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် လှုဒါန်းမှုဆောင်ရွက်မှု အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာကိုလဲ လူကြီးမင်းတို့ထံသို့ နေ့စဉ်အီးမေးဖြင့် တင်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။）
500,000 MMK（လူကြီးမင်းတို့ ၏ လှူဒါန်းမှုအား ကျွန်ပ်တို့မှ ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း" အီးမေလ်း ပေးပို့ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် လှုဒါန်းမှုဆောင်ရွက်မှု အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာကိုလဲ လူကြီးမင်းတို့ထံသို့ နေ့စဉ်အီးမေးဖြင့် တင်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ March လအကုန်တွင် Zoom ဖြင့် လှုပ်ရှားမှု၊ Report နှင့် မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးပါမယ်။ တစ်ဦးခြင်း မဟုတ်ဘဲ နေ့ရက်နှင့် အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပြီး ဤPlan တွင် ပါဝင်လှူဒါန်းသူအားလုံးကို တစ်ချိန်ထဲ Zoom ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မေးခွန်းအများကြီး ဖြေဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။）
30.85L MMK Funded
150L MMK Goal
Golden Future Volunteer
We, Golden Future Volunteer Group, isavolunteer group formed by the young people in Yangon Myanmar. This volunteer group was formed to support as much money we can, provide food, and other support to those who really need help.
လူကြီးမင်းတို့ ၏ လှူဒါန်းမှုအား ကျွန်ပ်တို့မှ ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း" အီးမေလ်း ပေးပို့ဂုဏ်ပြုခြင်း
လူကြီးမင်းတို့ ၏ လှူဒါန်းမှုအား ကျွန်ပ်တို့မှ ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း" အီးမေလ်း ပေးပို့ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ချီးမြှင့်ခြင်း
လူကြီးမင်းတို့ ၏ လှူဒါန်းမှုအား ကျွန်ပ်တို့မှ ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း" အီးမေလ်း ပေးပို့ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် လှုဒါန်းမှုဆောင်ရွက်မှု အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာကိုလဲ လူကြီးမင်းတို့ထံသို့ နေ့စဉ်အီးမေးဖြင့် တင်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့ ၏ လှူဒါန်းမှုအား ကျွန်ပ်တို့မှ ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့်၏ “ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း" အီးမေလ်း ပေးပို့ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် လှုဒါန်းမှုဆောင်ရွက်မှု အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာကိုလဲ လူကြီးမင်းတို့ထံသို့ နေ့စဉ်အီးမေးဖြင့် တင်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ March လအကုန်တွင် Zoom ဖြင့် လှုပ်ရှားမှု၊ Report နှင့် မေးခွန်းများကို ဖြေကြားပေးပါမယ်။ တစ်ဦးခြင်း မဟုတ်ဘဲ နေ့ရက်နှင့် အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပြီး ဤPlan တွင် ပါဝင်လှူဒါန်းသူအားလုံးကို တစ်ချိန်ထဲ Zoom ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မေးခွန်းအများကြီး ဖြေဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။